Amazinyo Alahlekile | I-Optismile Advanced Dentistry eKapa
amazinyo alahlekile EKAPA
Kungenzeka ulahlekelwe yizinyo kodwa, uthole i-optiSmile.
Elilodwa noma amaningi amazinyo alahlekile angaba nomthelela omkhulu endleleni esizizwa ngayo ngokubukeka kwethu, ikakhulukazi uma kungabonakala lapho simomotheka noma sikhuluma. Akuyona into engasizwa ngaso sonke isikhathi. Kwesinye isikhathi siphelelwa amazinyo ngenxa yengozi, ukutheleleka noma ukubola kwamazinyo okunzima futhi akulula ukuthi silungiswe ngokushesha. Masibhekane nakho, ukufaka amazinyo esikhundleni sinye noma ngaphezulu kungabiza kakhulu. Ngaphandle kwemiphumela esobala yezimonyo yamazinyo alahlekile, kukhona nezici zomzimba zokuba namazinyo alahlekile ezingangezela ebunzimeni.
Wonke amazinyo abalulekile njengoba kuqinisekisa ithambo lomhlathi nezinsini eliphilile futhi kukugwema ukuthi ubukeke umdala kunalokho oyikho ngempela. Kwa-OptiSmile sibhekane namacala amaningi amazinyo alahlekile, futhi kuhlale kumangaza ukubona umehluko ukumamatheka okubuyiselwe okungawenza ekubukekeni komuntu futhi ngenxa yalokho ukuzethemba kwakhe. Ubuchwepheshe bamazinyo esibusebenzisayo siyakhethwa futhi busetshenziswe ngenhloso ethile yokunikeza iziguli izixazululo ezinhle kakhulu ezitholakalayo. Ngakho-ke lapho uza ku-OptiSmile ukuthola izimila, amabhuloho noma ama-veneers, ungaqiniseka ukuthi sizosebenzisana nawe ukuklama ukumamatheka okuhle kakhulu.
kungani ukuba namazinyo alahlekile kuyinkinga?
Into yokuqala abantu abacabanga ngayo yimiphumela yobuhle yamazinyo alahlekile. Ukumamatheka okunempilo kungahamba ibanga elide futhi ukuba nezikhala emlonyeni wakho kungathonya indlela esizizwa ngayo ezimweni zomphakathi.
Ukumamatheka okunempilo kungahamba ibanga elide futhi ukuba nezikhala emlonyeni wakho kungathonya indlela esizizwa ngayo ezimweni zomphakathi. Ukuzwa amandla ethu nokuzethemba kwethu kuyavumelana nazo zonke izingxenye zesimiso sethu sansuku zonke.
Ukuphela kwamazinyo kuyaqhubeka nokuba yinkinga emhlathini, ngenxa yomphumela wokulahleka kwamazinyo emathanjeni. Amazinyo ashukumisa ithambo lomhlathi. Ithambo lomhlathi lithembele kulokhu kuhlangana phakathi kwamazinyo, izinsini namathambo ukuligcina likwimo nokuqina.
Imiphumela yokuqala esobala yamazinyo alahlekile ingaba ngokujulile ngokwengqondo, kepha imiphumela esobala engapheli, eqhubekayo yokulahleka kwamazinyo ingaqhubeka, noma ngemuva kokulahleka kokuqala kwezinyo noma kwamazinyo.
Ukonakala kwethambo lomhlathi
Amazinyo axhumana njalo ngokuqhubekayo phakathi nosuku, lokhu kuxhumana okuncane kuvusa umlenze we-periodontal, lapho izinyo ngalinye limiswa khona, futhi lokhu nakho kutshela ithambo elizungezile ukuthi lilungiswe futhi ekugcineni liqinise ekuphenduleni.
Ngonyaka wokuqala nje ngemuva kokuphuma kwamazinyo kungaba nokuncipha okungama-25% kububanzi bethambo esikhaleni esiseduze nezinyo elilahlekile. Lokhu kungaholela ekuphakameni kwamathambo afinyelela kumamilimitha ama-4 eminyakeni elandelayo. Ukulahleka kobubanzi bethambo kuholela ekulahlekelweni ukuphakama kwethambo okungaqala ukudala izinkinga ngokuhlafuna nokukhuluma. Ukuqhubeka kokulahlekelwa ngamazinyo nakho kungaba yimiphumela ngenxa yokuthi izindawo zezinsini ezizungezile ziba buthakathaka. Ukuqhubeka nokulahlekelwa ngamazinyo kuvame ukuholela ezinkingeni ezengeziwe zokusebenza eziqhubekisela phambili inkinga.
Ngokuhamba kwesikhathi ithambo lomhlathi langempela lingancibilika, okungaholela ekuweni kobuso kancane, kubangele ukuguquguquka kobuso, kudale ezinye izindaba zobuhle.
Kwa-OptiSmile sikholelwa ekunikeni kuphela izixazululo ezihamba phambili zeziguli zethu, yingakho senza okutshalwe ikakhulu. Yizixazululo ezihamba phambili zesikhathi eside maqondana nokuqina nempilo ephelele ye-maxillofacial. Sikholelwa ukuthi kungcono kakhulu ezigulini zethu futhi siyaqhubeka nokubona imiphumela emihle lolu hlobo lokuhlinzwa olungaba nayo empilweni yomuntu ngokwengqondo nangokomzimba.
Ungakusiza kanjani u-OptiSmile
Ngokuvamile sizoba nokubonisana kokuqala nawe ukuhlola isimo samazinyo akho futhi ngokususelwa kulokho sizokwenza isincomo. Uma ukhetha ukuqhubeka nenqubo yokufakelwa kwamazinyo inqubo izoba ngale ndlela elandelayo, kepha-ke futhi ungafunda kabanzi ngokufakwa kwamazinyo ekhasini lethu eliphelele lokufakwa kwamazinyo.
Sithatha ukuskena kwe-3D komlomo wakho. ngakho-ke singayihlola ngokunembile.
Umbono wedijithali uthathwa endaweni ethintekile.
Sisebenzisa ubuchwepheshe beCerec siklama futhi siqophe izinyo / amazinyo akho amasha.
Umhlahlandlela ekugcineni wenziwa wabeka ukubekwa kokufakwa kwakho okusha sha, kwe-titanium.
Ukufakwa kubekwe endaweni ngqo futhi izinyo elisha linamathele ngokuphelele emhlathini wakho.
Imvamisa lolu hlobo lwenqubo ludinga okungenani ukuvakashelwa okubili ukuze kuqedwe. Siyazi ukuthi isikhathi sakho sibalulekile, ngakho-ke sisebenzisa okumangazayo I-CEREC ukuqedela konke ukubuyiselwa ngasikhathi sinye.
Wamukelekile ukuxhumana nathi ukubhuka ukubonisana kokuqala noma ukukhuluma nethimba lethu nge-WhatsApp uma unemibuzo ethile mayelana nenqubo yokubuyiselwa kwezinyo elilahlekile. Siyajabula ukuphendula noma imiphi imibuzo yakho futhi sizohlala sisebenza neziguli zethu ukuthola isixazululo.
Kukhona njalo isixazululo, ungavumeli amazinyo alahlekile akuvimbe ekuholeni impilo enempilo.
Into yokuqala abantu abacabanga ngayo yimiphumela yobuhle yamazinyo alahlekile. Ukumamatheka okunempilo kungahamba ibanga elide futhi ukuba nezikhala emlonyeni wakho kungathonya indlela esizizwa ngayo ezimweni zomphakathi. Imiphumela yokuqala esobala yamazinyo alahlekile ingaba ngokujule ngokwengqondo, kepha imiphumela esobala engapheli, eqhubekayo yokulahleka kwamazinyo ingaqhubeka, noma ngemuva kokulahleka kokuqala kwezinyo noma kwamazinyo.
Ukuphela kwamazinyo kuyaqhubeka nokuba yinkinga emhlathini, ngenxa yomphumela wokulahleka kwamazinyo emathanjeni. Amazinyo ashukumisa ithambo lomhlathi. Ithambo lomhlathi lithembele kulokhu kuhlangana phakathi kwamazinyo, izinsini namathambo ukuligcina likwimo nokuqina. Ngokufana nokuthi ukungasebenzi kungadala kanjani ukulahleka kwamathambo nezinkinga ekugcineni lapho sesikhulile, kuyafana nasemhlathini.
Ziyini Izixazululo Ezitholakalayo?
Solutions Izinzuzo Okumbi
Amabhuloho angaguquki asekelwa ngamazinyo
Ukufakwa kwamazinyo kufakwe izinsimbi ezibekwe ngokuhlinzwa. Zibekwa emhlathini ngaphansi kwezinsini. Amazinyo angafakwa esikhundleni abekwa kokuthunyelwe.
Izimila zisekela amazinyo azungezile
Isungulwe kulayini wezinsini uqobo, inikezela ngesikhuthazo esikhuthaza ukugcinwa kwamathambo
Inketho yesikhathi eside
Ukugqoka okuncane emazinyweni azungezile
Akudingi ukuhlolwa njalo ngemuva kwenqubo
Akunakwenzeka ukuthonya imisebenzi yomlomo njengokukhuluma noma ukudla
Inqubo yokuqala yokufakelwa ingaba yingozi
Kungaba inqubo ebizayo
Amabhuloho ahleliwe asekelwa ngamazinyo (amabhuloho endabuko)
Lokhu kuhilela ukubekwa kwemiqhele ngapha nangapha kwezinyo elilahlekile nokubeka i-porcelain pontic phakathi ukuze isebenze njengezinyo elisha lokufakelwa.
Inketho edumile yezinyo elilodwa elilahlekile
Ukunakekelwa okuqhubekayo nokunakekelwa
Kungabeka ubunzima emazinyweni azungezile
Ukulimala kwamazinyo azungezile ngenxa yokubekwa komqhele
Ukuwohloka kwamathambo kusengenzeka njengoba izinyo lingafakwanga kulayini wezinsini
Akunakuhlala isikhathi eside njengokufakwa futhi kungadinga ukunakekelwa okuqhubekayo nokugcinwa
Amazinyo okufakelwa ayesuswa
Uhlaka olususekayo oluphethe eyodwa noma amaningi amazinyo okufakelwa.
Inketho edumile yamazinyo amaningi alahlekile
Hhayi ezinzile njengokufakwa kwamazinyo
Kungaba nomthelela enkulumweni
Akubukeki kungokwemvelo njengokufakwa
Resin ibhuloho eziboshiwe (Maryland bonded bridge)
Amazinyo okufakelwa (ubumba) asekelwa ngohlaka lwensimbi noma lwe-porcelain. Izimpiko zensimbi noma zobumba kolunye uhlangothi noma ohlangothini lwezinyo zihlanganiswe namazinyo akho akhona.
Inamathisela amazinyo aseduze ukuhlinzeka nge-support
Kubiza kancane kunokufakwa
Ukulimala okuncane kwamazinyo azungezile
Impilo ende enomkhawulo
Ayisekeli indawo yezinsini ezungezile namathambo, ngakho-ke ukuwohloka kungenzeka
Amazinyo okufakelwa aphathekayo asusekayo
Uhlaka olususekayo oluphethe lonke isethi lamazinyo okufakelwa.
Izindleko eziphansi ezihlukile kokufakelwa
Inqubo esheshayo kunokufakwa
Akuvimbeli ukuwohloka kwamathambo
Ingashintsha lapho umuntu ekhuluma, ekhuluma, ezamula noma ekhwehlela
1. Sithatha a Ukuskena kwe-3D lomlomo wakho
2. Umbono wedijithali uthathwa endaweni ethintekile
3. Ukwakhiwa kwamakhompiyutha kanye neCEREC kubaza izinyo elisha
4. Umhlahlandlela wenzelwe ukubekeka kahle kokufakwa kwakho kwe-titanium
5. Ukufakwa kufakwa endaweni ngqo futhi izinyo elisha linamathiselwe